polyester mhepo-kutonhodza Sefa pajira riya - China Zhejiang Tiantai Yongzhu Fliter
Steel mhete vaisona firita bhegi
PTFE Kamudzira tsono vainzwa
Polyester Anti-kunofambira mberi tsono akanzwa (sezvaiita rakasarudzwa ...
P84 (polyimide) tsono vainzwa
mhepo ezvinhu Filter MeSH
1.first mu rwakapetwa, ipapo mupurasitiki mubhegi 2. atorwa ne isapinda sailcloth 3. muchiso wako nokuwanda mita zvinogona akadhindwa ari pajira riya 4. wako kutumirwa chiratidzo unogona akadhindwa ari atorwa
sample: 1-3days, vakawanda zvinhu nguva: 10-20days kana paminiti uwandu
Magadzirirwo kuti zvinhu zvenaironi monofilament pajira riya:
1) Material: 100% zvinhu zvenaironi
2) Weaving: Plain ruka
3) Mesh Count: 4T ~ 140T yepasi / masendimita (10mesh ~ 355 pajira riya / padiki)
4) Max. Upamhi: 365cm (143 padiki)
6) Mesh Opening: 30-1500um
Mafomu ose zvinhu zvenaironi monofilament pajira riya:
Filteration: Nokuzivikanwa kushandiswa munzvimbo sezvo filtration uye nekupatsanurwa indasitiri (zvinowanzoshandiswa zvokudya filtration uye maindasitiri Sefa), kuti maindasitiri epetroleum, makemikari, simbi, simende, kwezvakatipoteredza dedusting vanguwo. Filtration rate inogona kubva 27% kusvika 78%. Zvakadai sezvokudya indasitiri pakugaya mupise uye furawa azvikuya, azvikuya uye dzimwe tsanga azvikuya. Kufanana shuga kugadzira, upfu mukaka, soybean mukaka etc.
1.for miduku, nengarava nenzira rekutakura
2.for yakawanda, shiped nendege kana nomugungwa
3.tracking nhamba chichange emailed kwamuri pashure kuti yave nengarava
Nei ndichifanira kusarudza US?
Tiantai Yongzhu Filter Factory akanga specialized mukuita mhepo-kutonhodza Sefa pajira riya kwemakore anopfuura 15, tinoziva sei kuti yepamusoro chigadzirwa pamwe price.hope zvakanaka tichava zvakanaka pamwe nemi.
2.Can I kuwana dhisikaundi?
Sezvamunoziva kuti, isu kuhwina musika pamwe zvemakwikwi mutengo uye hwakanaka. Saka, mutengo isu vakapiwa nguva dzose tiri zvakanakisisa. Asi tinogona kukupa chaiyo dhisikaundi kana wako kuti uwandu anokwezva.
3. sei iwe kugadzirisa matambudziko kana nhumbi vane matambudziko uye haagoni kushandisa?
Tinovimbisa iwe kuti zvinhu zvinogona ndanyarara hangu uye vakadzoka kana usiri kugutsikana unhu.
4. My kuti uwandu muduku, unogona kupa?
Yes.We tichashumira ose mutengi tiine unhu zvigadzirwa zvakanaka uye mabasa pasinei zvikuru wako
5.Can ukapiwa OEM basa?
Ehe. We zvinopa OEM basa vatengi.
Previous: polypropylene mhepo-kutonhodza firita pajira riya
35ppi Gray Burst anotengesa Perforated Air-Condition firita Mesh
Air Filter For First Stage Filtration
Guruva noMuteresi Glass Fiber tsono Felt Air Filter Bag For Bag Filter
zvinhu zvenaironi Air Condition Mesh
Zvinhu zvenaironi White / Black Air-Conditioning filters
Polyester Air Condition Mesh
Polyester Air-Conditon firita Mesh
mapeji Air Condition Mesh
mapeji White Air-Conditioning filters
P White / Black Air-Conditioning filters